Nickel Wire Mesh, Ballaaran Birta mesh mesh, mesh silig mesh - Ansheng
Balaadhinta birta mesh silig
Epoxy dahaarka Wire mesh
Ahama Steel silig mesh
Mesh steel silig mesh
Galvanized-xidhkii tolmo wanaagsan silig mesh
Taxanaha Filter Extruder
Galvanized ma aha bir ama daawaha; waa geedi socod lagu dahaadhay zinc daaweyn ah birta si looga hortago miridhku. Si kastaba ha noqotee, warshadaha mesh siligga, si kastaba ha noqotee, waxaa badanaa loola dhaqmaa sidii qayb gaar ah sababtoo ah faafitaankeeda baahsan ee dhammaan noocyada codsiyada. Waxaa sidoo kale laga samayn karaa silig bir ah ka dibna zinc daahan galvanized. Guud ahaan marka la hadlayo, ikhtiyaarkan ayaa ka qaalisan, wuxuu bixiyaa heer sare oo ah u adkaysiga daxalka .waa ...
Birta caadiga ah, oo sidoo kale loo yaqaan birta kaarboon, waa bir aad loo isticmaalay warshadaha mesh siligga. Waxay ugu horreyn ka kooban tahay bir iyo qadar yar oo kaarboon ah. Caannimada badeecaddu waxay u sabab tahay qiimaheeda oo hooseeya iyo adeegsiga baahsan. Mesh silig miiqan, oo sidoo kale looyaqaano dharka birta ah. Mesh silig bir cad
Mesh silig welded ka samaysan yihiin tayo sare leh silig steel-carbon-hooseeyo, baaraandegi by sax toos ah iyo qalab farsamo alxanka saxda ah alxanka, ka dibna electro galvanized kulul-rusheeyey galvanized, PVC iyo daaweynta kale dusha for passivation iyo plasticization. Waxyaabaha: silig bir ah oo kaarboon hooseeya, silig birta ah oo birta ah, iwm
Mesh-ka birta ah ee la balaariyay waa shey bir ah oo ay sameysay makiinada birta ee balaarisay feerka iyo mashiinka xiirista si ay u sameeyaan mesh. Waxyaabaha: saxan Aluminium, saxan bir ah oo kaarboon hooseeya ah, saxanka birta ah ee birta ah, saxan birta ah, saxanka naxaasta ah, saxanka naxaasta ah, saxanka aluminium magnesium alloy, iwm. Dusha mesh wuxuu leeyahay astaamaha adkeysiga, adkeysiga miridhku, caabbinta heerkulka sare, iyo saamaynta hawo wanaagsan. Noocyada: Accord ...
Shirkaddayadu waa shirkad ku takhasustay soo-saarka iyo iibinta mesh silig bir ah iyo qalabka miiraha. Wax soo saarka ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa mashiinada, petrochemical, caag, metallurgy, pharmaceutical, water treatment iyo warshadaha kale. Shirkadeenu waxay leedahay qalab soosaarid iyo tijaabooyin horumarsan, maareyn cilmiyaysan oo adag iyo xakameyn tayo leh. In kabadan 20 sano oo horumar ah, waxay noqotay shirkad casri ah oo iskuleysa R & D, naqshadeynta, soosaarka, iibka, iyo adeega. Marka lagu daro qancinta macaamiisha gudaha, badeecadaheenna Waxaa sidoo kale loo dhoofiyey Mareykanka, Brazil, Jarmalka, Poland, Australia, New Zealand, Taiwan iyo dalal kale iyo gobollo.
biraha la balaariyay waa xaashi bir ah oo la jeexjeexay ka dibna la kala bixiyay si loo abuuro qaab dheeman ama laba geesle ah. Dadku waxay u isticmaali karaan siyaabo badan Tilmaamaha sida hoos ku xusan: Xargaha waa xarigyo bir ah oo jeexjeexan, ama dhinacyada furitaanka dheemanka. SWD, ama Jidka Gaaban ee Naqshadeynta, waa masaafada u dhexeysa p ...
Shaashadda Extruder waa noocyo kala duwan oo silig mesh googooyaa
Qalabka waa inta badan bir cad, bir bir ah iyo waxyaabo kale. xirmooyinka shaashadda birta ah ee birta ah ayaa uga adkeysi badan miridhku kuwa kale ee kale. Shaashadda birta ahama ee Extruder Screens-ka ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa xaashiyaha balaastigga ah ee caaga ah,, granulator, iyo marada aan la karin, midab masterbatch, iwm mesh: ...
sharaxaadda wax soosaarka Mesh silig mesh ayaa loola jeedaa alaabada mesh silig bir ah oo ka samaysan waxyaabo nikkel saafi ah (silig nikkel ah, saxan nikkel ah, bireed niil, iwm) oo leh naykel nikeedu yahay 99.5% ama ka sareeya Marka loo eego habka wax soo saarka, alaabooyinka ayaa loo qaybiyaa noocyada soo socda: A. Nickel w ...
Epoxy waxay xirtay mesh silig
1. Magaca sheyga / naanaysta: Epoxy mesh silig daboolan, mesh daahan epoxy, mesh daahan electrostatic, mesh ilaalinta hidaha mesh, mesh filter Haydarooliga, mesh filter birta mesh, mesh taageerada filter, mesh shaashadda daaqadda epoxy. 2. Hordhac faahfaahsan oo ku saabsan badeecada: Warshadaha epoxy ee dahaarka ...
No.346 Xinying East Street, Degmada Anping, Hebei. Shiinaha